Vaccination mot covid-19 för dig som är 65 år eller äldre - Skåne - somaliska
Talaalka covid-19 ee loogu talo galay shaqsigaaga ah ama ka weyn 65 sano
Vaccination mot covid-19 för dig som är 65 år eller äldre - Skåne - somaliskaThe content concerns Skåne
Miyaad ku nooshahay gobolka Skåne sanadka aad dhalatayna yahay 1956 ama ka hor? Hadii ay sidaa tahay waxaa mar dhaw kuu imaan doono warqad ka socota goobta caafimaadka ee xaafadda. Halkaa waxaa ku xusnaan doono sidii aad waqti lagaa talaalo covid-19 u samaysan lahayd.
Adiga ayaan doorka iska leh hadii aad doonayso in lagu talaalo. Talaalkuna waa bilaash.
Goorma ayaan waqti ballansan karayaa?
Waxa aad waqti ballansan karaysaa marka ay ku soo gaarto warqada goobta caafimaadka ee xaafada. Dadkuna dhamaan warqada isku mar ma wada helayaan. Shaqsigaaga ugu ayaa caadiyaan helaya talaalka.
Warqadana waxa aad helaysaa markii la gaaro xilligaagi talaalka. Waxa ayna qaadan karaysaa dhawr todobaad laga bilaabo marka dadka ugu waaweyn ay helaan warqadahooda.
Warqaduhuna nidaamkan ayaa loo soo diri doonaa:
Shaqsiyaadka ah ama ka weyn 85 sano.
Shaqsiyaadka u dhexeeya 76 ilaa iyo 84 sano.
Shaqsiyaadka u dhexeeya 70 ilaa iyo 75 sano
Shaqsiyaadka u dhexeeya 65 ilaa iyo 69 sano.
Waqtigaaga ka ballanso goobta caafimaadka ee xaafadaada
Waa in aad waqti ballansataa si talaal u hesho.
Siyaabahan kala u ballanso waqti:
Gall bogga 1177.se. Marka aad gashana dooro goobta caafimaadka ee xaafadaada isticmaalna aalada adeega internetka oo online waqti ku ballanso. Waxa aad u baahan teesaraha mobiilka si aad u gasho bogga 1177.se, tusaale ahaan bank-id. Mana isticmaali karaysid shaqsi kale teesarihiisa dhijitaalka ah.
Waxa aad sidoo kale wici karaysaa goobta caafimaadka ee xaafada.
Halka aad kala xiriiri karasyo goobaha caafimaadka ee xaafadaha gobolkan Skåne
Iska kansal waqtiga hadii aad xanuunsantahay
Miyaad dareemaysaa in aad xanuunsantahay marka aad talaalka leedahay? La xiriir goobta caafimaadka ee xaafada oo kansal waqtiga. Waqti cusub oo lagu talaalo waa aad ballansan karasyaa.
Sida tan ayaad ugu diyaargaroowbaysaa talaalka
Ka jawaab su´aalaha xiriira caafimaadkaaga ee foomka hubinta caafimaadak (hälsodeklarationen). Foomka hubinta caafimaadka waxa uu la socdaa warqada ay goobta caafimaadka ee xaafada kuu soo dirayaan. Foomka hubinta caafimaadka waxaa kaliya oo la helaa iyadoo swedish ah.
Horay u soo qaadi foomka hubinta caafimaadka iyo teesarahaaga marka talaalka tagayso. Miyuu foomka hubinta caafimaadku kaa dhumay? Wac goobta caafimaadka ee xaafada iyaga ayaana ku caawinaya.
Soo xiro dhar kalkaalisooyinka u fududayn karaya in ay garabkaaga si fudud ku haleeli karayaan. Tusaale ahaan funaanad/garan gacmo gaab ah.
Waqtagii aad ballansatay ku imaw goobta caafimaadka. Waqti badana ha kasoo hor dhicin. Markaa waxaa dhici karaysa in goobtu ay noqoto ciriiri oo sidaasina uu covid-19 ku fido.
Hadii aad xanuun dareemayso
Miyaad dareemaysaa in aad xanuunsantahay marka aad talaalka leedahat? La xiriir goobta caafimaadka ee xaafada si aad ballantaadii u fasaxdo. Waqti cusub ee talaal waa aad samaysan karaysaa.
Sida tan ayaad waqti u ballansanaysaa si laguu talaalo
Hadii aad qaadato dawooyinka dhiiga khafiifiya
Miyaad qaadataa dawooyinka dhiigga khafiifiya? Markaa waxaa laga yaabaa in aad u baahantahay in dawooyinkaaga qaadato waqti aanan ahayn waqtigii aad caadiyan qaadan jirtay. Markaana waxa aad yaraynaysaa halista in ay cilladi kaa soo wajahdo dhiigbax.
Hadii aad qaadato dawooyinkan Eliquis, Xarelto, Pradaxa eller Lixiana
Hadii aad qaadato hal kaniin maalin kastaa: qaadi kaniinka labo saacadood kadib markii lagu talaalo.
Hadii aad qaadato hal kiniin subax iyo galabba: Ha qaadan kaniinka subaxdii maalinta lagu talaalayo.
Hadii aad qaadato dawooyinka Trombyl, Acetylsalicylsyra, Clopidogrel, Efient, Brilique, Dipyridamol eller Diprasorin
U qaado kaniinyadaada sidii caadiga ahayd.
Hadii aad qaadato dawooyinka Heparin, Fragmin, Innohep eller Klexane
Hadii aad dawada qaadato subaxdii: Dib u dhigo dawada oo qaado labo saacadood kadib markii lagu soo talaalo.
Hadii aad dawada qaadato fiidkii: U qaado dawadaada sidii caadiga ahayd.
Hadii aad qaadato dawooyinka Waran eller Warfarin
Talaalka waa aad qaadan karaysaa hadii tiradaadii PK-INRka ee ugu danbeeyay ka hooseysay 3. Tirada PK-INRka waxa ay cabiraysaa sida uu dhiigu u fariisto.
Hadii aad qaadato dawooyin kale
Miyaad qadataa dawooyin kale oo dhiiga khafiifiya? Ama dhawr ka mid ah dawooyinkan kor ku xussan? Talowadaag la samee dhaqtarkii kuu soo qoray dawooyinka inta aadan talaalka qaadan ka hor.
Sidatan ayuu talaalku u hirgalayaa
Halkan ayaad ka aqrin karaysaa sida uu talaalku u hirgalayo:
Sidatan ayuu talaalku u qabsoomayaa
Kadib waxa aad goobta caafimaadka sii joogi doontaa 15 daqiiqo. Sidaa ayaa caadiyan la sameeyaa marka uu qofku talaal maro. Waqtigaana shaqaalaha goobta caafimaadka ayaa la soconaya caafimaadkaaga talaalka kadib.
Sideebuu cafimaadkaygu noqonayaa kadib?
Waxa aad u baahantahay labo talaal
Waxa aad u baahantahay in aad is talaasho labo jeer. Hadii kale difaac kugu filan ee covid-19 ma helaysid.
Goobta caafimaadka ayaa ballanta labaad kuu samaynaya. Waxaa waqti lagu siinayaa isla marka aad talaalka koobaad qaadato. Talaalka labaad waxaa caadiyan la qaataa dhawr kadib.
Waxa ay qaadanaysaa todobaad ama labo todobaad kadib talaalka labaad in aad hesho difaac kugu filan ee covid-19. Laakiin waa in aad wali u hogaansantaa talooyinka wasaaradaha xitaa kadib talaalka.
Warbixin dheeraad ah ka aqriso 1177.se
Sideebuu caafimaadkaygu noqonayaa kadib?
Ku saabsan talaalka ka hortagga covid-19